Fanamby Sasany Amin’ny Fampiasana Ny Teny Tz’utujil Maya Ao Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2014 14:36 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, Español, English
San Juan La Laguna, Goatemala. Sary avy amin'i imsbildarkiv, voaaro amin'ny zon'ny mpamorona CC BY-NC-ND 2.0 license.
Tiako ny manasongadina ny fisian'ireo fanamby mba handrisihana olona maro kokoa amin'ny andraikitra fanoratana ny teny Maya ao amin'ny media sosialy. Ny fanapariahana manerantany ny teny Espaniola no tena fanamby goavana indrindra hoan'ireo teny indizeny sy hoan'ireo teny Maya Tz'utujil.
Mivoaka amin'ny teny manjaka (Espaniola) ny fampahalalam-baovao rehetra ary manao izany izy ireo noho ny fampiasam-bola goavana avy amin'ireo mpanao dokambarotra. Ary mety misy koa ny fikasana politika amin'ny fanaraha-maso ny vahoaka rehefa maro ny olona mampiasa teny tokana. Tsy mba manana fahafahana hivelatra ireo teny indizeny, ary misy ny fironana mankany amin'ny fihenana, maro ankehitriny ho ohatra ireo teny indizeny tsy ampiasaina intsony raha tsy ao an-trano.
Misy ny kolontsaina mampirona mankany amin'ny fanjifana hatrany eo amin'ny fanjifana ny vaovao avy amin'ny fampahalalaham-baovao, saingy tsy amin'ny tenim-piarahamonina. Tsy misy ihany koa ny ezaka hiantohana ny faharetany holovain-jafy. Raofi-pananana na henjehina ho radio “piraty” ireo loharanom-baovao goavana vitsy avy amin'ny vahoakan'i Goatemala satria nametraka lalàna manome vahana ireo orinasam-pampahalalaham-baovao lehibe ny fanjakana. Koa raha misy onjam-peom-paritra mipoitra, dia tampenam-bava haingana iny. Ny fanamby hafa dia ny rafi-pampianarana nasionaly izay manana tanjona voalohany hanangana fiarahamonina mitovy endrika ao anatin'ny firenena manankarena ara-kolontsaina sy ara-pomba amam-panao.
Hoan'ireo mpiteny Maya izay mianatra any amin'ny sekoly tsy miteny afa-tsy espaniola ihany, dia mora ho azy ireny ny mamaky izany teny izany (Espaniola) noho ny tenin'izy ireo manokana. Toa hita fa misy sakana ara-tsaina ny famakiana ny teny Maya satria vakian'ilay olona amin'ny fomba firafi-teny espaniola ilay teniny manokana.
Afaka miresaka momba ny fanavakavahana ataon'ny tena atao amin'ny teny indizeny ihany koa izahay. Tonga hatrany amin'ny ambaratonga hitsipahany ny mari-panondroana ny tenany [amin'ny teniny] ny fanavakavahana. Maro ireo manasokajy ny teny indizeny ho efa ntaolo manelingelina ny fandrosoana ankehitriny. Hitanay rehefa misy ray aman-dreny manana fiaviana indizeny Maya miteny ireo zanany amin'ny teny espaniola, fa manapaka ny fampitana ny teny Maya izany. Izany ny zava-manahirana mitoetra maharitra amin'ny teny maro.
8 ora izayKaraiba